Fritters kusukela Ithanga apula Ihambe ithenda kakhulu, esihlwabusayo kanye namanzi. Lokhu dessert engavamile kungcono ukwenza ngesidlo sasekuseni, njengoba kuza ngemuva kokuthi ukugcwaliswa esikhulu, futhi engafuni ukudla kuze kube ntambama. Ngaphezu kwalokho, lezi khekhe izithelo nemifino kukhona pancake enempilo kakhulu evamile, eyayibonakala okulungiselelwe kefir noma ubisi.
Apple pancake ovela ithanga: iresiphi, isithombe yogwadule siphelile
izithako ezidingekayo ukuze isizinda:
Ithanga ucezu ebalulekile noma kusuka yemifino ezinkulu - 350 g;
inhlamvu Usayizi medium nezinhlobonhlobo amnandi - 2 PC.
esiphezulu ubisi fat angadle ngabuhle obutheni - ½ inkomishi;
isihlabathi ushukela - 1 spoon ezinkulu (uma uthanda, zingandiswa);
ufulawa, sifted, ukolo - 4 spoon enkulu nge-slide;
standard inkukhu neqanda - 1 pc.
usawoti iodized kulungile - engeza ukunambitha;
Ezilungisiwe amafutha sunflower ukuthosa imikhiqizo.
Pancake ovela ithanga apula uzilungiselele nge izithelo nemifino (hhayi ebilisiwe). Ngakho-ke, kuyadingeka ukuthenga obuncane ithanga soft, khona-ke kuhle ukugeza, ikhasi, imbewu yemisipha indawo. Umkhiqizo liyadingeka ukukuthinta on a grater esikhulu nendawo endishini ejulile.
Pancake ovela ithanga apula Kuyophumela ethubeni esihlwabusayo kanye namanzi, uma ukulungiswa le dessert zisebenzisa kanzima futhi izithelo amnandi kuphela. Kufanele wageza, bahlanza kusuka emabhokisini imbewu futhi delicately ukususa ikhasi, uma embozwe wax. apula Ngaphezu kwalokho okudingekayo gaya usebenzisa grater ezinkulu noma ezincane.
Uma izithelo nemifino acatshangelwe kahle ukuhlanganisa nabo zibe munye esitsheni, bese ufaka kubo zingxenye ezilandelayo: okuqukethwe ubisi angadle ngabuhle obutheni esiphezulu amafutha, isihlabathi ushukela, amaqanda, usawoti kanye iodized ufulawa ukolweni omuhle sifted. Zonke izithako ezidingayo ukuxubana, ngokuletha udinga ukuthola isizinda viscous orange.
Pancake ovela ithanga apula ethosiwe kuso ncamashi ngendlela efanayo dessert enjalo eyenziwe ngesisekelo yogurt. Ukuze wenze lokhu kushisa kakhulu sauté pan ne amafutha sunflower, bese ukubeka phezu eziningana lulwimi siphelile inhlama viscous. Ngaphezu kwalokho pancake edingekayo gazinga ne izinhlangothi ezimbili (imizuzu 10-12) iqhubekele plate.
Indlela isicelo ibhulakufesi
Amnandi eqotho pancake ithanga (nge isithombe izitsha zingatholakala ngenhla) kufanele zethulwe ngesidlo sasekuseni ashisayo. Lokhu dish kuyinto efiselekayo zinqwabelane phezu ipuleti bese uthele phezulu Maple isiraphu, fresh uju ezimibalabala noma ubisi wafingqa. Futhi, le dessert Kunconywa ukufaka itiye amnandi noma ikhofi eqinile.
Eziwusizo Ukusikisela emizi
Ukuze kakhulu ukunciphisa isikhathi sokupheka ukudla kuso, Batter for pancake Awukwazi ukwengeza ithanga engahluziwe steamed. Ngenxa yale njongo yemifino nahlanza efiselekayo wafaka kubhayela double futhi thermally zicutshungulwa ngaphakathi imizuzu 17-20. Le nqubo yenza umkhiqizo ethambile okuningi futhi amnene.
Endometrioid simila wesibeletho - kuyini, indlela yokuphatha
Ibhizinisi elibheke phambili? Konke, okuxhunywe nobuchwepheshe kunoma iyiphi indawo